အသက် ၂၂ - ၂ လအကြာ ZERO လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု။ စွမ်းအင်မြင့်မားသော ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုပါနှင့်။ Your Brain On Porn
အသက် ၂၂ - ၂ လအကြာ ZERO လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု။ ဒါ့အပြင်စွမ်းအင်မြင့်မားခြင်း၊ ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊
လောလောဆယ်ကျနော်ပထမဦးဆုံးဇန်နဝါရီလ 2016 ၏ကတည်းက hardmode အပေါ်ဖြစ်၏။ တစ်ခါတုန်းက5ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သညျ။ ငါအတက်အကျနှစ်ခုပြင်းထန် flatlines ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါအခုထိသဘောပေါက်အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးငါလူမှုရေး interaction ကတကယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။ အတိတ်ကာလ၌ငါတခါတရံပူမိန်းကလေးငယ်တစ်ဝှမ်းနည်းနည်းဦးနှောက်အာရုံကြောတယ်။ သူတို့ကိုငါသဘောကျတယ်သို့မဟုတ်မပါလျှင်ယခုငါလျှို့ဝှက်စွာမဆိုမိန်းကလေးသို့မဟုတ်ကောင်လေး, လွတ်လပ်သောနှင့်အတူစကားပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာခက်ခဲခရီးခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်ငါကဒီတော်တော်လေးတာအကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးဆိုနိုငျသညျ။ ကျွန်မကြုံတွေ့သည်အခြားအကျိုးကျေးဇူးများကို:
သူတို့ကို objectifying မပါဘဲမိန်းမနှင့် socializing ခံစားခြင်း
သင့်ရဲ့ dips / flatlines လေးစားခြင်းနှင့်သူတို့ကိုသင်တို့၏စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
လူတို့သညျမှ ပို. လေးစားမှု
Flatlines များသည်တော်တော်လေးရှည်လျားပြီးပြင်းထန်နိုင်သည်၊ သင်သည်သင်၏ဘ ၀ တွင် porn ကိုဘယ်လောက်အထိကြည့်ပြီးဘယ်လောက်ကြာသည်ကိုမူတည်သည်။ အကယ်၍ မင်းမှာမျှော်လင့်စရာအရာတစ်ခုရှိရင်၊ အပြာတွေမြန်မြန်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ ရက်သတ္တပတ်မှစပြီးမြို့ကြီးတစ်မြို့သို့သွားသောခရီးသည်ဤအရာသည်ဖြစ်နိုင်သည်။ မင်းက flatline ကိုလေးစားပြီးသင့်စိတ်ကိုမင်းကိုပြန်မပေးမိအောင်မလုပ်ပါနဲ့။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ် (ကျွန်ုပ်သည်သင်၏စာကိုဖတ်ပြီးသင်၌အားကစားရုံမရှိကြောင်း၊ Mens Health ကိုဖတ်ပြီးအိမ်၌လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါသည် (ဥပမာ Pull-up bar) ကိုကျွန်ုပ်ဖတ်သည်။
လုံလောက်အောင်ကျန်းမာကိုစားသငျသညျ dont လကျထကျအပျေါသွပ်များနှင့်ဗီတာမင်ဆေးပြားကိုယူ
တစ်ရက် 5-10 မိနစ်ဆငျခွငျ
အေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်း (သင်ရမ္မက် / မတရားသောကျဆင်းကူညီပေးသည်) ။ နောက်ဆုံးတဦးတည်း hasnt ငါ့အဘို့အထဲကအလုပ်မလုပ်သေးပဲပူပြင်းတဲ့ရေချိုးခန်းနဲ့တူ haha
သို့သော်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကံကောင်းပါစေနှင့်ထိုအရာများသည်ကျွန်ုပ်ကိုများစွာကူညီပေးခဲ့သည်။ ပြန်မလာပါနှင့်၊ ကောင်းသောအရာများလာလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၂ နှစ်ရှိပြီး၊ ငါထင်တယ်အသက် 22 နှစ်ကနေ porn ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သော ၃-၄ နှစ်အတွင်းအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟွတ်ကင်တွေတောင်လည်ပတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ့ ဦး နှောက်ထဲမှာနက်ရှိုင်းစွာကြိုးတပ်ထားတယ်
LINK -2လအတွင်းပြီးနောက် ZERO လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်
နောက်ဆုံးထွက် - NoFap ၏4လအတွင်းငါသည်ကိုယ်ကိုချစ်
Nofap ၏ Hee သည်ယောက်ျားများ,
ကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိတွင် ၄ လနှင့် ၁ ပတ်နေပါသည် ၅ ပတ်အကြာတွင်တစ်ကြိမ်သာလိင်ဆက်ဆံခဲ့သဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာမနေခဲ့ပါ။ NoFap ကကျွန်တော့်ကိုအမျိုးသမီးတွေပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာအပြင်အများကြီးအကျိုးကျေးဇူးတွေပေးခဲ့တယ်။
အေးဆေးတည်ငြိမ်နှင့်မိန်းမတစ်ဝှမ်းစိတ်အေးလက်အေး, မပို objectifying မြည်းနှင့် tits
အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများမှ ပို. လေးစားမှု
ပိုပြီး brainfog နှင့်ပြောစကားများရှာဖွေနေခြင်းမရှိပါ
ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုမှမရှိဘဲအမျိုးသမီးနှင့်ယခုပေါင်းသင်းနိုင်ပြီးမျက်လုံးချင်းထိတွေ့မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့စံနှုန်းဟာအရင်ကထက်ပိုမိုမြင့်မားပြီး၊ ငါမူးမူးသောအခါမပြောင်းလဲပါ ကျွန်မရဲ့လိင်ကိစ္စဟာလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီ။ နောက်တစ်ခေါက်မှာချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံချင်တာကိုငါလိုချင်တယ်။ ငါမိန်းကလေးငယ်များအပေါ်အများကြီးရွေ့လျားမှုလုပ်ပေမယ့်ငါတကယ်သူမကြိုက်သည့်အခါသူမနှင့်အတူသာအိပ်ရန်ကြိုးစားနေ။
လူတွေဟာကျွန်တော့်ကိုဘယ်လိုထင်သလဲဆိုတာဂရုမစိုက်ကြဘူး။ အခုအချိန်မှာကောင်မလေးမရှိတော့တာကိုစိတ်မပူပါနဲ့။ ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးကသတိထားမိတာတွေမကြာခဏဆိုတော့ငါ nofap ကတည်းကအပြောင်းအလဲအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ မနေ့ကညမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကမင်းကိုမင်းအရင်ကထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်။ ပြီးတော့သူမကကျွန်တော့်အတွက်တကယ်ပျော်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။
ငါ၏အလွန်ဂုဏ်ယူပါတယ်ရာ PMO, ငါ့စွဲကျော်ဖြစ်ကြောင်းကိုရိုးရိုးသားသားပြောယခုအခါပွိုင့်ရောက်ရှိနေပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့ကိုနောက်ရည်မှန်းချက်ငါ့အသက်ကိုတိုးတက်အောင်နှင့်အမျှမကြာခဏယခုတွင်ငါသည်ပြုပါအတိုင်းအားကစားရုံကိုသွားစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့လက်ရှိအတွေးအခေါ်တွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတတျနိုငျပါလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်အဖြစ်တစ်ဦးကရည်းစား, ကျိန်းသေငါ့ကိုလာမယ့်လအတွင်းကြိုးပမ်းရန်အဘို့အပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
+3လအတွင်းနှင့်သင်၏အတှေ့အကွုံအမြားအပွားကိုနားထောငျဖို့မြျှောလငျ့သငျသညျအကြိုးကြေးဇူးရှိသမျှနှင့်အတူသဘောတူပါသလား သငျသညျလိင်ကိုဘယ်လိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့သလဲ
နောက်ဆုံးထွက် - ၅ လနီးပါးအထိရောက်ရှိခြင်း - အကျိုးခံစားခွင့်အသစ် ၃ ခု
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် မှစ၍ ကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောအပိုအကျိုးကျေးဇူးအချို့ကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည် -
သင်ယခုအချိန်၌လုံးလုံးလျားလျားရောက်ရှိနေသည့်ထိုအချိန်လေး၊ သင်ရှိနေခြင်းဟူသောခံစားချက်။ စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့အဆောက်အအုံတစ်ခုကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဒီဟာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ငါဟာအနာဂတ်အတွက်နဲ့ငါ့ရဲ့အလုပ်သမားကိုအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိခဲ့တယ်။ အကောင်းဆုံးခံစားမှု
နောက်ဆုံးထွက် - ငါ့အသက်ကို၌ငါ့အဖေနှင့်အတူအကောင်းဆုံးစကားပြောဆိုမှုရှိခဲ့
ပထမနောက်ခံအချက်အလက်အချို့ - ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၂ နှစ်ရှိပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် nofap (hardmode) ကိုနှစ်သစ်ကူးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကို ၇ လကြာမထိခဲ့ပါ။ ငါ့အဖေ (သို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး တစ်ယောက်) ကိုငါ့ရဲ့စွဲလမ်းမှုအကြောင်းဘယ်တော့မှမပြောဘူး၊ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုမလုပ်တော့ဘူး၊
ယနေ့ငါငါ့ခမည်းတော်နှင့်အတူတစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားကြီးမြတ်စကားပြောဆိုမှုရှိခဲ့သည်။ နောက်ကျောကိုငါ့အားလပ်ရက်အပေါ်ဟိုတယ်၌တည်၏။ ငါတကယ်ကဒီအခိုက်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ထိုသို့သောအတှေ့အကွုံခဲ့တော့ဘူးစကားလုံးများကိုရှာဖွေနေခြင်းကို dont ။ Nofap ခင်မှာအစဉ်မပြတ်ငါ brainfog ၏ alot ကြုံတွေ့။ ကျနော်တို့ကအဲဒီလိုပြင်းထန်ဖခင်-သားစကားပြောဆိုမှုခဲ့မိန်းကလေးငယ်များ, carreer, ယေဘုယျအားဖြင့်အသက်တာကိုအကြောင်းဟောပြောသည်။ ရှေ့တော်၌, ကျေးဇူးတင်စကား Nofap ဒီခဲ့ဘယ်တော့မှမ!
ပတ်ပတ်လည်3လအတွင်းမှာငါတကယ်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်း၌ငါ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ ကိုဖော်ပြရန်ခဲယဉ်းပေမယ့်ကျွန်မငယ်ရွယ်စဉ်အခါကလေးဘဝနှင့်ငါ့ကျောပိုးအိတ်ခရီးထွက်ခရီးဟောင်းကိုဗီဒီယိုများမှတဆင့်ရှာဖွေနေသောအခါငါသည်လည်းကြက်သီးတယ်။ ငါအများကြီး fapping (positive နဲ့ negative) သင့်စိတ်ခံစားမှု numbs ထင်ပါတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်အလွန်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့် painfull အချိန်လေးပိုပြီးပြင်းထန်တွေ့ကြုံခံစား
Flatline ခက်ခဲသည်, လျှော့မတွက် dont! စာအုပ်များဖတ်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်း (လက်ဝှေ့ထိုးခြင်းနှင့်လေးလံသောလေ့ကျင့်ခြင်း) သည်ကျွန်ုပ်၏ခရီးစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုများစွာအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ ကျန်းမာစွာစားခြင်းနှင့်အတူ (ငါဘယ်တော့မှပီဇာသို့မဟုတ်အစာရှောင်အစာကိုဘယ်တော့မှမစားတော့ပါ) ။ ED မှာတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဖူးသော်လည်း nofap ကကျွန်တော့်ကိုပိုမိုခက်ခဲသောအလှူရှင်များနှင့်ကူညီပေးခဲ့သည် ငါထင်မြင်ချက်အရှိဆုံးကွဲပြားခြားနားမှုများမှာ - - စွမ်းအင်ပိုမိုများပြားခြင်း - အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအားပိုမိုလေးစားမှု - အတွင်းစိတ်ပိုမိုယုံကြည်မှု - စကားစမြည်ပြောဆိုရာတွင်စကားလုံးများနှင့်လွှမ်းမိုးသောမျက်လုံးချင်းမတွေ့ခြင်း။
UPDATE - porn စောင့်ကြည့်စရာမလိုဘဲ 10 လအတွင်း: ကငါ့ကိုပြောင်းလဲသွားပုံကို
ငါဇန်နဝါရီလ 1 ရက်နေ့တွင်စတင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကတည်းကငါမဆို porn ကိုကြည့်ကြပြီမဟုတ်။ ၆ လ ၅ လအကြာ (ငါလုံးဝအော်ဂဇင်လုံးဝမရှိ၊ မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်သာလိင်မှုကိစ္စပြုခြင်း) ပြီးနောက်အလွန်ခက်ခဲသောအချိန်ရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက်ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုစတင်ရရှိသည်၊ တစ်ချိန်က porn မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးအမှန်တကယ်ကောင်းမွန်သောခံစားမှုရရှိခဲ့သည်။ စိုစွတ်သောအိပ်မက်များပေါ်ထွက်လာခြင်းမရှိတော့ဘဲယခုငါ ၁ လနီးပါးအော်ဂဇင်မရဖြစ်နေသည်။ ငါတကယ်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါမနမ်းခဲ့ဘူးသို့မဟုတ်သူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဘူးပေမယ့်သူမမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာသူမဖြစ်လိမ့်မည်ဟုငါသိ၏
ငါသည်ငါ့စွဲလမ်းထဲမှာအနက်ရှိုင်းဆုံးခဲ့ငါ 15 မှအသက် 22 ထံမှ porn ကိုအသုံးပြုထင်, ဒါပေမယ့်အသက်အရွယ် 19-21 ။ ငါအမျိုးသမီးများကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်ကိုယ်အဘို့ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါအခုထိငါ့အသက်ကိုဖန်ဆင်းအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု။
UPDATE - NoFap ၏ 1 တစ်နှစ်အကြာတွင်ဘဝမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အဓိပ်ပာယျရှိလိင်ခဲ့
ယောက်ျားတွေ၊ ငါဘာပြောရမှန်းမသိဘူး လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ rollercoaster တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ 14 နှစ်သမီးအရွယ်ကတည်းကညစ်ညမ်းတဲ့စွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းခဲ့ဖူးတယ်၊ အမြဲတမ်းဘဝမှာကားမောင်းတဲ့ဘောလုံးတွေမရှိတဲ့ဒီအဆင်မပြေတဲ့ကောင်လေးပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အားကစားနှင့်တေးဂီတတွင်အောင်မြင်ရန်အတွက်အပြိုင်အဆိုင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကစားခြင်းနှင့်အဆုံးမဲ့ညစ်ညမ်းမှုများကိုကြည့်ရှုခြင်း၌သာကျေနပ်မှုရရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်စရာငါသည်ငါ့ 22 နှစ်တွင် nofap ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကြှနျုပျအဘို့ fapping တော်တော်လေးကောင်းသောသွားလေ၏မဟုတ်ပါဘူး။ အစဉ်အဆက် Nofap ၏ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးပါမှာတော့ကျနော် (6 တစ်ညရပ်တည်ချက်နှင့်အတူ) 1 လအတွင်းတစ် hardmode ပြည့်စုံ။ ငါအားကစားရုံအတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းသောပုံသဏ္ဍာန်အတွက်တယ်သူတို့အား6လအတွင်းကျွန်မရဲ့တက္ကသိုလ်ဘောလုံးကိုအတွက်အပူဆုံးနေ့စွဲခဲ့ကျွန်မရဲ့အသက်တာ၌ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အမိန်းကလေးငယ်များရက်စွဲပါငါပြန်လာတစ်ခုခုမျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲ, သူစိမ်းမှနှင်းဆီပန်းများနှင့်ကော်ဖီ ပေး. , ငါ အစဉ်အဆက်မတိုင်မီဘဝမှာထက်စာသားပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ ငါ, ငါ့အဖြစ်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အခြားဘာမျှမနေထိုင်ခဲ့သည်။ ငါတော့ဘူးအဆင်မပြေလူမှုရေး, ဘဲ, လုံ့လရှိသူဖြစ်ခဲ့သည်ကိုနောက်တဖန်မ brainfog နှင့်လူအပေါင်းတို့၏အရေးအပါဆုံးခဲ့ရတယ်။
အဲဒီခြောက်လကြာပြီးနောက်ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်စိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုရပ်တန့်သွားစေရန် porn မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ အစပိုင်းမှာတော့ဒါကအများကြီးမကူညီဘူးလို့ငါထင်ခဲ့တယ် အကြိမ်အနည်းငယ် mastubated ပြီးနောက်, ငါ့စိုစွတ်သောအိပ်မက်တွေကိုရပ်လိုက်တယ်။ သို့သော်စစ်မှန်သော nofap 'superpowers' ၏ဆိုးကျိုးများလည်းပျောက်ကွယ်သွားသည်။ စကားမစပ်၊ စူပါပါဝါများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စွဲလမ်းသူကိုသာဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အခုတော့ငါရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာအော်ဂဇင်မပါဘဲပြန်လာပြီ၊ တကယ်ပျော်တယ်။
Nofap ဟာအမျိုးသမီးတွေ၊ စွမ်းအင်တွေအကြောင်းမဟုတ်တာကိုသတိရပါ၊ အဲဒါကမင်းဘဝမှာသူ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုသွားနေတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ။ ဂီတ၊ အားကစား၊ စီးပွားရေးနှင့်ခရီးသွားခြင်းတို့တွင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝင်စားမှုများကိုယခင်ကထက် ပို၍ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါအရင်က nofap ကိုမသိခဲ့ဘူး။ ငါအနာဂတ်နှင့်ငါပြီးမြောက်ချင်သောအရာကိုအဘို့အအရမ်းဖောင်းပွခံစားရသည်။
ယောက်ျားတွေ post ကိုသင့်ရဲ့ခရီးအပေါ်ရှည်လျားကောင်းသောကံမှရတဲ့နှင့်သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါက, ငါ့ကိုစာပို့နေပါသည်!
နှစ်ရက်အကြာငါသည်ငါ့ 1 တစ်နှစ် NoFap အစီရင်ခံစာ posted:
တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်မမျက်လုံးချင်းခိုင်မာသော, လူထုစာကြည့်တိုက်ထဲမှာမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုမြင်တော်မူ၏။ ဒါနဲ့သူမ၏အထိလမ်းလျှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်, ငါတို့အနည်းငယ်စကားပြောဆိုမှုရှိခဲ့ပြီးတော့ကျနော်တို့မကြာမီသောက်ဖမ်းပြီးနှင့်သူမ၏အရေအတွက်ကိုတယ်သင့်တယ်အကြံပြုသည်။ လေ့လာနေပြီးသောက်တက်သည်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ထိုနေ့သူမအား Texted ။ ရက်စွဲ, တော်တော်ကောင်းကောင်းအနည်းငယ်အချိုရည်သည် သွား. သူမ၏နမ်းခြင်းနှင့်နှုတ်ဆက်ဟုပြောသည်။
မနေ့ကကျွန်တော့်ရဲ့ဒုတိယရက်အနည်းငယ်ရှိခဲ့တယ်၊ မတူတဲ့ကဖေးဆိုင်တွေမှာသောက်စရာတွေ၊ ဂိမ်းတွေကစားခဲ့တယ်။ ရေကူးကန်အချို့ကစားနေစဉ်တွင်လှောင်ပြောင်ခြင်းသည်အလွန်မြင့်မားသည်။ သူမကိုအိမ်ပြန်ခေါ်သွားပြီးညဘက် ၂ ကြိမ်နှင့်မနက် ၂ ကြိမ်တိုင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ NoFap မတိုင်မီငါလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကကြုံတွေ့ခဲ့ရသောဆက်သွယ်မှုတစ်ခုတကယ်ပဲရှိသည်။ NoFap မတိုင်မှီ ၁၉ နှစ်တိုင်အောင်အပျိုစင်ဘ ၀ မှာကျွန်မမှာတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဖူးဘူး၊ တခါတလေထူးဆန်းတဲ့တစ်ညတည်းခိုခန်းတွေရှိခဲ့တယ်။
ငါ2တစ်ညငါ့အ NoFap ကာလ, ထိုကြီးမြတ်မဟုတ်ကြရာနှစ်ဦးစလုံးစဉ်အတွင်းရပ်တည်ခဲ့အဓိပ္ပါယ်ရှိသောလိင်ရှိသည်ဖို့တ် fucking တစ်နှစ်ငါ့ကိုယူခဲ့ပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့ခရီးစဉ်အတွင်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စိုက်ပျိုး, သို့သော်ဤငါ့အဘို့ကြီးတွေခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်ဖူး ..